Calaamadda Gaarka ah ee Shiinaha ee Sanduuqa Baakadaha Indhaha Beenta Jumlada 25mm 100% Warshadda Indhaha ee Mink | Weiti
Calaamadda Gaarka ah Khaanadda Baakadaha Indhaha Beenta Jumlada 25mm 100% Indhaha Indhaha
1, 25mm dhirbaaxo dhogor mink dhaadheer leh
2, Qaloocan kaamil ah oo ku habboon karbaashyadaada
3, Way fududahay oo raaxo leh in la dalbado
4, Astaanta gaarka ah ee gaarka ah
Iftiinkii Kalocils karbaash:
Midabku waa mid dhalaalaya, siman, aan caajis ahayn, kaas oo ah astaamaha indhashareerka beenta oo tayo sare leh.
Jilicsanaanta iyo adkaanta:
Maaddada adagi waxay cadaadis badan saari doontaa indhaha indhaha, ka dib marka la xidho, waxay u egtahay mid been abuur ah oo aan dabiici ahayn. Haddii indhashareerka beenta ahi aad u jilicsan yihiin, si qumman uma qumman yihiin, qaloocuna wuu hooseeyaa. Waxa ugu habboon ayaa ah inay jilicsan tahay oo xoogaa ka adag tahay baalashaada dhabta ah.
Baaritaanno been ah oo wanaagsan ayaa si dabiici ah u soo bixi doona, oo la mid ah qalooca koritaanka ee baalasha sare. Baaritaannada beenta ah ee tooska ah waxay dareemi doonaan qallafsanaan marka la xirto, quruxna ma jiri doonto.
Codsiga iyo isticmaalka:
Indhashareerka beenta ah ayaa lagama maarmaan u ah helitaanka quruxda. Haddii ay tahay qurxinta maalinlaha ah ama ka qaybgalka xafladaha qoob -ka -ciyaarka ee kala duwan, indhashareerka wanaagsan ayaa soo jiidan doona dareenka dadka oo naftaada kalsooni dheeraad ah ka dhigi doona.
Noocyo kala duwan oo indhashareer oo kala duwan ayaa lagu siin karaa tiro aad u badan oo kayd ah sidoo kale waxay taageeri karaan habaynta, si aad u hesho baalasheeda beenta ah ee aad jeceshahay waqti kasta. Sida soo saaraha indhashareerka beenta ah, had iyo jeer wuxuu ahaa yoolkayaga inaan si joogto ah u horumarinno hababka baalasha indhaha ee kulul iyo kuwa caanka ah.
Sanduuqyada baakadaha baalasheeda ee kala duwan ayaa la beddeli karaa, astaantaada gaarka ahna waa la beddeli karaa. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa noo soo dir ama noo sheeg fikraddaada astaanta aad rabto. Kooxdayada naqshadeynta xirfadda leh ayaa ku siin doonta soo -jeedinta ugu fiican. Waxaan bixinnaa naqshadeynta astaanta bilaashka ah iyo adeegyada naqshadeynta baakadaha. Haddii aad u baahan tahay sawirro alaab, sawir la qaaday annaga ayaa samayn karna.
Karbaashyadaada ku kaydi sanduuqa wax lagu kaydiyo ee ay soo galeen si aad uga ilaaliso inay nadiif ahaadaan, qalalaan oo ka ilaaliyaan inay waxyeello soo gaarto.
Haddii karbaashyadaadu ay ku kor -koraan, HA QAADIN, tani way baabbi'in doontaa. Si aad u nadiifisid wixii soo kordhay, si tartiib ah uga masax karbaashkaaga mascara nadiif ah. Waxa kale oo aad si taxaddar leh uga saari kartaa xabagta hadhay ee ku taal baakadda karbaashka oo leh maroojiyaha. Fadlan MARNA ha qoynin jeedalladaada.
Marka si fiican loo daryeelo jeedalladaada dib ayaa loo isticmaali karaa qiyaastii 20-30 jeer
TALO: Si aad u kordhiso cimrigaaga oo aad u sii ilaaliso qaabkii asalka ahaa ee karbaashkaaga, si toos ah ha ugu saarin mascara. Bedelkeeda, mari maaskaro wajigaaga dabiiciga ah marka hore, u oggolow inuu engego, ka dibna mari karbaashyadaada.
Hore: Kordhi Calaamadda Gaarka ah ee Fidinta Mink -ka ee Farshaxanka ah ee Qarsoodi ah
Xiga: Khaanadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Khaaska ah Jumlada qalafsan 25mm Muraayadaha Mink
3d Indhashareer been ah
baarkooda been abuurka ah
Indhashareer been ah oo qalafsan
karbaashyada astaanta gaarka ah
Daad 100% Mink Real 25mm 5D Indhaha Indhaha ...
Shiinaha Factory jumlada jumlado OEM Been ...
Jeexa indhaha, Kordhinta Indhaha, dibinta, jeedal mink, Iibiyeyaasha Indhaha, indho -dejiye,